विराटनगर, भदौ १२-प्रदेश नं. १ सरकारले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन यसै महिनाको अन्तिम साता समापन गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएको र कुनै समितिमा गएको जानकारी दिँदै भदौ अन्तिम सातासम्म संसद चल्ने बताए ।
संसदमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, सहकारी विधेयक, प्रदेश विद्युत् सम्बन्धी विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र सवारी व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता रहेको छ । ती विधेयक पारित भएसँगै संसद अन्त्य हुने भण्डारीले जानकारी दिए ।
सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरुको भूमिका सकारात्मक रहेको बताए । सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले कानून निर्माण गर्ने सवालमा सबै दलहरु एकमत रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
केही दिन अघि प्रदेशसभाबाट लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा संघीय समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले असहमति जनाएका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म पारित १ नम्बर प्रदेशका विधेयकहरुमा दलहरुको असहमतिका कारण कुनै ठूलो विवाद सिर्जना भएको छैन ।
वर्खे अधिवेशनबाट प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लागेपनि नाका विषयमा कुनै प्रकृया अघि बढेको छैन । नाका सवालमा तिब्र विवाद हुने देखिएपछी कुनैपनि दलका सांसदले प्रदेशको नाका सवालमा संसदमा कुरा उठाएका छैनन् । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने सवैको सहमतिमै प्रदेशको नामाकरणको टुंगो लगाउने बताउँदै आएका छन् ।
कलंकीमा १७ वर्षीया एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार